Mamorona modely tsara indrindra ho an'ny mailakao amin'ny BeeFree | Famoronana an-tserasera
Manuel Ramirez | | Fitaovana famolavolana, Templates
Androany ny fampiasana mailaka dia ilaina amin'ny zavatra maro, ary anisan'ireny ny mety ahafahana manao buletin-gazety na mivarotra ny serivisinay amin'ireo fifandraisana marobe izay mety ananantsika.
Fomba fanatonana tsara nefa ilaintsika kely ny fisaintsainantsika sy ny fahaizantsika mamorona fampiroboroboana na newsletter izay tena mampiato ny fifandraisana amin'ny fotoana fohy hamakiana azy. Raha tsy te handany fotoana be ianao amin'ny famoronana modely anao, misy fitaovana web sasany izay manampy antsika amin'ity lafiny ity dia ilay iray izay entintsika anio avy amin'ireo andalana ireo ao amin'ny Creativos Online ary izay antsoina hoe BeeFree.
BeeFree manana fanomezana lehibe mamorona mailaka manolotra ny serivisinay na inona na inona izy ireo. Ankoatr'izay dia azonao atao ny manova fiteny eo anelanelan'ny Anglisy, Italiana ary Espaniola mba hahamora kokoa ny fanovana izany mailaka na mailaka izany.
Raha vantany vao manomboka mamorona ny modely izahay dia azonao atao ny misafidy ny atiny na ny modely ifotony ho an'ny promo, e-commerce, newsletter na tsotra. Ny tsy fitovizany dia ny sasany efa tonga miaraka amina endrika ahafahantsika manova haingana ny sary fa ireo fototra kosa dia banga fotsiny amintsika hametrahana ao aminy ny famoronana rehetra.
Ny fotoana handehanantsika modely Ho hitantsika eo amin'ny efijery lehibe izay ahafahantsika manampy sakana, manova sary, manova lahatsoratra, misafidy loko ambadika ary maro hafa. Mora toy ny fisafidianana sakana iray ary manova azy hatrany ambony ka hatrany ambony ho an'ny loko, sisintany na ivoho. Raha misafidy lahatsoratra iray isika, dia hanana fitaovana fototra nefa feno hanamboarana newsletter na promo mora foana.
BeeFree, andao lazaina miezaha hamaha zavatra amin'ny fomba tsotra ary tsy misy fahasarotana ka rehefa vita ny maodelintsika dia afaka misintona ilay rakitra na mandefa azy amin'ny alàlan'ny MailUp. Misy fitaovana hafa fa ny BeeFree ao anatin'ny dingana beta dia mbola iray amin'ireo tsara indrindra raha tsy ny tsara indrindra amin'izao fotoana izao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » dia midika hoe » Templates » BeeFree, mpamoaka mailaka an-tserasera maimaim-poana tsara indrindra